न्याय प्राप्तिमा 'हदम्याद' बाधक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'राष्ट्रपतिले यो हदम्यादको अध्यादेश ल्याऊ भन्न सक्नुहुन्न र ? सकिन्छ नि । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । यति धेरै अध्यायदेश ल्याउन सक्नुहुन्छ । यो हदम्याद हटाउने कानुनका लागि अध्यादेश ल्याउन किन ल्याउन सक्नुहुन्न ?'
'हदम्यादले बल्लतल्ल आवाज उठाएका पीडितलाई हतोत्साहित त गर्छ नै । पीडाका बीच बोल्न साहस गरेकालाई अझ दमन गर्छ ।'
जेष्ठ ६, २०७९ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — 'यो कस्तो नियम हो नेपालको? एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिइँदैन रे कोर्टले । मेरो आशा हराउँदै गएको छ । के तपाईंहरुले माल्भिकाको क्षमायाचना हेर्नुभयो,' बलात्कारमा परेकी युवतीले बिहीबार राति सुसी खान जाने हो नामको टिकटक अकाउन्टबाट भक्कानिँदै भनिन् ।
आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आफूलाई नियन्त्रणमा लिएर बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै ती युवतीले अर्को भिडियो बनाउँदै हदम्यादसम्बन्धी कानुनमाथि प्रश्न गरिन् । १६ वर्षको हुँदा २०१४ मा 'मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल'का आयोजकले ६ महिनासम्म आफूलाई यौन शोषण गरेको कुरा बाहिर ल्याएसँगै हदम्यादकै कारण न्याय पाउने आश हराएको बताएकी हुन् । 'मलाई अहिले थाहा भयो, एक वर्षसम्म रिपोर्ट गरेन भने त्यो फाइल दर्ता भए पनि कोर्टले फिर्ता गरिदिन्छ । त्यसो भए के म पीडित होइन ? कोही ढिला बोल्छन् कोही छिटो बोल्छन् । म बोल्न सकिनँ ।'
हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले नाबालक पीडित भएमा १८ वर्ष पुगेको १ वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मुद्दा दर्ता गर्नुअघि कानुनले सुरुमै हकदैया(मुद्दा गर्ने अधिकार छ वा छैन), क्षेत्राधिकार र हदम्याद हेर्ने गर्छ । आठ वर्षपछि सार्वजनिक भएको उक्त घटनामा युवतीका लागि हदम्यादको कानुन आकर्षित हुने बताउँछिन् अधिवक्ता राधिका खतिवडा ।
'४/५ वर्षको उमेरमा पनि करणी भएको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिले १८ वर्ष पुगेको १ वर्षभित्र मुद्दा हाल्नुपर्छ । यहाँ १६ वर्षको उमेरमा घट्ना घटेको भन्नु भएको छ । उहाँले १९ वर्ष(रनिङ)को उमेरमा त्यो मुद्दा हाल्नु भएको भए लाग्थ्यो । तर अहिलेको कानुन नसुधारेसम्म मुद्दा चल्न सक्दैन,'खतिवडाले भनिन्,'‍उहाँमाथि अन्याय भएको छ । त्यसैले यस्तो कानुनमा सुधार आवश्यक छ ।'
कानुनी उपचारमा हदम्याद बाधक बनेको यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । बलात्कारसम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्याद बाधक बनेका यस्ता थुप्रै घटना छन् । हदम्यादकै कारण ५ जना युवाको बलात्कारपछि गर्भवती बनेकी रुपन्देही पट्खौलीकी १३ वर्षीया किशोरीले कानुनी उपचार पाइनन् । आफ्नै फुपूको छोराबाट बलात्कारमा परेकी बुटवल -११ की १४ वर्षे किशोरीको उजुरी दर्ता भएन । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडितहरू हदम्यादकै कारण न्यायको बाटो बन्द नहोस् भन्दै शुक्रबार युवाहरुले स्वत:स्फूर्त बालुवाटार घेराउ गरे । बलात्कार पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाजसहित प्रदर्शनमा पुगेकाहरूको एउटै माग थियो –'हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।'
हदम्यादको कानुनले यौन हिंसा भोगेकालाई हतोत्साही गर्ने हुँदा यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आफूहरुले प्रतिरोध गरेको बताउँछिन् हिरादेवी वाइवा । 'हाम्रोमा कानुन बनाउने ठाउँमा को छ? पितृसतात्मक सोच भएकाहरु । उनीहरुले आफूलाई बचाउने कानुन बनाउने भयो । पीडितले कति लामो समयपछि आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोल्छ । हाम्रोमा सामाजिक मनोविज्ञान नै पीडितको संरक्षण गर्ने, उसको मनोबल दिने खालको छैन नि । त्यसले गर्दा उसलाई बोल्न लामो समय लाग्छ । उ आफैं एक्लै लड्छ, आफैंलाई जितेपछि बल्ल बाहिर ल्याउने हो त्यो कुरा,'उनले भनिन्,'हदम्याद भनेको सर्भाइभरहरुको कानुनी प्रक्रियाको बाधक र उत्पीडकहरूको उन्मुक्ति हो । अहिले पीडितले लामो समयपछि हिम्मत गरेर बोलेकी छन् । तर त्यो कुरालाई त कानुनले कतै पनि स्वीकार्दैन नि त । उल्टो त्यसले त उत्पीडकलाई हदम्याद गइहाल्यो भनेर खुलेआम हिँड्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ ।'
बलात्कारको विषयमा बोल्नलाई जति संघर्ष गर्नुपर्छ, बोलिसकेपछि पनि पीडितले त्यो भन्दा संघर्ष गर्नुपर्ने हुँदा हदम्यादले पीडितलाई पीडित मात्रै बनाउने गरेको उनको तर्क छ । 'हदम्यादको कानुनले पीडितलाई अझै बढी पीडित बनाउने मात्र गर्छ । हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ, हदम्यादको पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलनको आवाज थियो,'वाइवा भन्छिन्,'हदम्यादले बल्लतल्ल आवाज उठाएका पीडितलाई हतोत्साहित त गर्छ नै । पीडाका बीच बोल्न साहस गरेकालाई अझ दमन गर्छ । मैले बोलेर पनि केही हुँदैन रहेछ भन्ने हुन्छ नि त ।'
हदम्याद पीडकको पक्षमा भएकाले यौन हिंस्रकहरूलाई उन्मुक्ति नदिन यो कानुन खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् प्रतिरोध समूहका मनोज खतिवडा । 'हदम्यादको कानुनले एउटा समयसम्म हदम्याद राखिदिएको छ । त्यो समयसम्म उजुरी दिएन भने हिंस्रकहरु यत्तिकै उम्कने वातावरण छ । यो महिला हिंसा, बलात्कार जस्तो अपराधमा हदम्यादजस्तो कुरा अनुचित, अनुपयुक्त हो । त्यो त पीडकको पक्षधर कुरा हो,'बालुवाटार घेराउमा भेटिएका उनले भने,'त्यसैले यो हदम्याद भन्ने नै खारेज हुनुपर्छ । हिंस्रकको हातमा शक्ति, सत्ता हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले त्यो बेलासम्म भुलाउने, धम्क्याउने, तर्साउने, प्रभावमा राख्ने काम गर्छ । यो कानुनी व्यवस्था त उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा भयो नि । महिलाले आफूमाथि भएको जुनसुकै दुर्व्यवहारको कुरा विश्वास गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।'यौन हिंसाका सवालमा हिम्मत जुटाएर बोल्ने पीडितको आवाजलाई सहानुभूति र समानुभूतिसहित सुनिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
नेकपा माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह राज्यले हदम्याद हटाउनुपर्ने धारणा राख्छिन् । 'लामो समयपछि उनले आफ्नो कुराहरु बाहिर ल्याउने साहस गर्नुभयो । त्यो साहसका लागि मेरो स्यालुट । ठूलो साहस गरेर उहाँ आउनु भएको छ । यस्ता यौनजन्य हिंसाहरु सम्भव भएसम्म लुकाउने सामाजिक प्रचलनजस्तो बनेको छ । यस्तो हुँदा पीडकहरूले मनोवैज्ञानिक ढंगले मनोबल उठ्ने र अब यी घटना बाहिर आउँदैनन् भन्ने कुराहरु जसरी बलात्कारको घटना बढिरहेका छन् । प्रतिष्ठाका कारण पीडितले बोल्दैनन् । सामाजिक जीवन र पारिवारिक जीवन धराप पर्छ भन्ने जे मनोविज्ञान र बुझाइहरू छन् त्यो त्यसलाई क्रस गरेर उहाँ बाहिर आउनु भएको छ,'सिंहले भनिन्,'अहिले सार्वजनिक भएकी पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने सोचनीय विषय बनेको छ । घटनाबाहिर मात्र आउने र त्यसैमा सीमित हुने वातावरण मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाले पीडितहरूलाई यसरी बाहिर आउने वातावरण नबन्ने जुन अवस्था छ कानुनी हदम्याद हटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।'
नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बराल पनि हिंसाका रूप एउटै नहुने हुँदा यो मुद्दामा कानुनो विकल्प बनाई कानुनी उपचारको बाटो अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । ती युवतीको हकमा माल्भिका सुब्बा र फोटोग्राफर श्रीधर पौडेलले समेत उक्त घटनालाई पुष्टि हुने गरी अभिव्यक्तिहरु दिइसकेको हुँदा त्यसका आधारमा पनि न्याय दिन राज्य चुक्न नहुने उनको भनाई छ । 'अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ । पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले त्यतिबेला मैले उनलाई सहयोग गर्न सकिनँ भनेर स्वीकारेकी छन् । फोटोपत्रकार श्रीधर पौडेलले त्यस घटनाबारे जानकार रहेको बताएका छन् । सरोकारवालाले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा कानुनका नयाँ विकल्प खोजेर पीडितलाई न्याय दिन राज्य चुक्नु हुँदैन भन्ने नै हो,'उनले भनिन्,'अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुका लागि घटना सन्दर्भअनुसार कानुनी विकल्पका दायरा अझ बढी लचिलो हुने अथवा कडा बनाउने भन्ने कुरातर्फ राज्य संयन्त्र अगाडि बढ्नुपर्छ । घटनाको प्रकृति हेर्दा यो विषय तुरुन्तै बाहिर निकाल्न नमिल्ने उनको व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक विषय थियो होला । तर घटना थाहा पाइसकेपछि न जस्तोसुकै विषयमा न्याय दिन राज्यको कानुन चुक्न दिनु भएन भन्ने हो ।'
चौतर्फी चर्चा भएझैं के ती युवतीका लागि कानुनी उपचारको बाटो हदम्यादकै कारण बन्द भएको हो त ? अब उनले न्याय प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नपाउने नै हो ?
मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता मोहना अन्सारी युवतीले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउन सक्ने धारणा राख्छिन् । 'प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाउन सक्छ । ती बहिनीले आत्महत्याको दुस्प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँ अहिले कानुनी उपचारको बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ,'उनले भनिन्,'उहाँले प्रहरीलाई सम्पर्क गरेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको कारण खुलाउनुभयो भने प्रहरी मुद्दा चलाउन बाध्य हुन्छ ।' हुन त शुक्रबारमात्रै अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाको नेतृत्वमा प्रहरीको टोली युवतीको घरमा पुगेर कानुनी प्रक्रियामा छलफल गरेको छ । साथै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले यो विषयलाई शुक्रबार मात्रै संसद्‍मा उठाएका थिए । गम्भीर मुद्दा भएकाले हदम्यादमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत उनले अनुरोध गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि आजै संसद्को रोस्ट्रमबाट उक्त घटनामा तत्काल अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
हदम्यादले समाज नै पछाडि पारेकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमाथि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अन्सारी बताउँछिन् । 'व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर यौन शोषण गर्नु सामान्य कुरा होइन । जसले यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छ भने यो नेपालको कानुनी इतिहासमा राम्रो छ कि नराम्रो यसले देखाउँछ । विगतमा यति धेरै फैसला भएका छन् कि जसमा टेकेर यो मुद्दालाई अगाडि लैजान सकिन्छ,'उनले कान्तिपुरसँग भनिन्,'राष्ट्रपतिले यो हदम्यादको अध्यादेश ल्याऊ भन्न सक्नुहुन्न र ? सकिन्छ नि । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । यति धेरै अध्यायदेश ल्याउन सक्नुहुन्छ । यो हदम्याद हटाउने कानुनका लागि अध्यादेश ल्याउन किन ल्याउन सक्नुहुन्न ?' हदम्यादले गर्दा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन नहुने अन्सारी बताउँछिन् ।
तत्कालीन मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा नेपालको ३५ दिनको मात्रै हदम्याद थियो । त्यसलाई संसद्ले २०७२ मा बढाएर ६ महिना पुर्‍यायो । २०७५ भदौ १ यता १ वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसरी हदम्याद बढाउन सर्वोच्च अदालतले तीन पटकसम्म सरकारलाई आदेश दिनु परेको थियो । २०६५ मा अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल(हाल सर्वोच्चको न्यायाधीश)को रिटमा न्यायाधीश बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अपराधको गम्भीरतालाई हेरि हदम्याद बढाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
'जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराध रोक्ने र कानुनको प्रभावकारी प्रयोग गरी न्यायमा पीडितहरुको अर्थपूर्ण पहुँचका लागि तत्काल विद्यमान कानुन पूर्ण नभएमा वा भइरहेको कानुनमा संशोधन आधारमा यस अदालतले उपयुक्त आज्ञा जारी गर्न सक्ने,'आदेशमा उल्लेख गरिएको छ,'हदम्यादको व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएको देखिकोले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी अपराधको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।'
यही आदेशमाथि टेकेर युवतीको मुद्दालाई अगाडि बढाउन सकिने मोहना बताउँछिन् । 'यौन हिंसामा परेको व्यक्तिले त्यसबारे बोल्न कति साहस बटुल्नुपर्छ । यो सामान्य विषय होइन । प्रहरीले पनि किन त्यतिबेलै बोलेन भनेर प्रश्न गर्छ । यो यति ठूलो कुरा हो । बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्नलाई आत्मविश्वास ठूलो कुरा हो,'अन्सारी भन्छिन्,'भर्खर करिअर बनाउन हिँडेको एउटा बालिकाका लागि यो कुरा कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । अहिले उनले बोलिरहेकी छिन् । यस्ता मुद्दामा बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठलगायतको यस्तै तीन वटा आदेशमा टेकेर न्याय प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्छ ।'
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा विभिन्न भिडियोहरु बनाउँदै युवतीले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् । पछिल्लो समय भने'मिस ग्लोबल इन्टरनेस्नल'का आयोजक मनोज पाण्डेको आफूलाई बलात्कार गरेको उनले सार्वजनिक गरेकी छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ २०:३९
सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा उभिए कलाकार
जेष्ठ ५, २०७९ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत एक युवतीले आफू १६ वर्षको हुँदा सौन्दर्य प्रतियोगिताका एक आयोजकले आफूसँग गरेको यौन दुर्व्यवहारबारे बोलेकी छन् । सन् २०१४ को सौन्दर्य प्रतियोगिता 'मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल 'मा भाग लिन लगाउँदै आयोजकले आफूलाई ६ महिनासम्म ‍यौन दुर्व्यवहार गरेको कुरा भिडियोमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् ।
'६/७ वर्षको हुँदा मैले ३/४ वटा फिल्म खेलेको थिएँ । ठूलो भएपछि अभिनेत्री, मोडल हुने मन थियो । त्यसैले १२ को परीक्षा सकिएपछि म 'हाउस अफ फेसन'मा अडिसन दिन गएँ । म त्यहाँ छानिइनँ । तर अडिसनको तस्बिर बाहिर आएपछि मलाई कसैले म्यासेज गर्‍यो । उसले मलाई फोटोसुट गर्न आउ भन्यो । म एकदमै उत्साहित थिएँ । किनभने मलाई मोडल बन्नु थियो । म गएँ । फोटो खिच्ने व्यक्ति एकदमै चलेको अनलाइनको फोटोग्राफर थियो,'बुधबार 'सुसी खान जाने हो' नामको टिकटक अकाउन्टको भिडियोमा युवतीले भनेकी छन्,'त्यो फोटोग्राफर र त्यो अब्युजर(यौन दूराचारी) दुवैजना मिलेर मेरो फोटो खिच्यो । मलाई फोटोसुटको पाँच हजार दिइयो । त्यो अब्युजरले आफूले सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको बताउँदै मलाई सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्‍यो । मैले त्योभन्दा अगाडि पनि सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिइसकेको थिएँ । त्यसैले म त्यो सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएँ ।'
विभिन्न भागमा सार्वजनिक भिडियोमा उनले दाबी गरेअनुसार उक्त प्रतियोगितामा उनी फस्ट रनर्सअप भइन् । भिडियोमा उनले कसैको नाम खुलाएकी छैनन् । आफूले ड्राइभमा राखेको सबै कल रेकर्डिङ र टेक्स्ट मेसेज डिलिट गरेको बताउँदै उनले आफूमाथि भएको बलात्कारको खुलासा गरेकी छन् । 'मैले कल रेकर्डिङ, टेक्स्ट मेसेजहरु ड्राइभमा राखेको थिएँ । म त्यो मेसेज र कल रेकर्डिङ सुन्दै रुने गर्थें । सायद २०१८ तिर मैले त्यो सबै डिलिट गरिदिएँ । मसँग कुनै पनि प्रमाण छैन,'अल अबाउट दी स्किन नामको इन्स्टाग्राममा पनि सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनले भनेकी छन्,'विजेता भइसकेपछि एकदिन त्यही अब्यूजरले मलाई फोन गर्‍यो । तिमी तयार भएर आउ, हामी सक्सेस पार्टी गर्दैछौं भन्यो । कुनै पनि कार्यक्रम भइसकेपछि त्यसको सक्सेस पार्टी गरिन्छ । म तयार भएर एभरेस्ट होटलमा गएँ ।'
होटल पुगेपछि उनले त्यहाँ कोही देखिनन् । 'तिमी चाँडै आयौ, पार्टी ६/७ बजेबाट सुरु हुन्छ,'उक्त यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिले प्रयोग गरेको वाक्य सम्झँदै उनले भनेकी छिन्,'त्यसपछि उसले मलाई लेमोनेड खान अफर गर्‍यो । त्यो वेलकम ड्रिंक हो भनेर भन्यो । मैले पिएँ । त्यसपछि १०/१५ मिनेटपछि मलाई रिंग्यायो । त्यसपछि मैले त्यो यौन दूराचारीलाई घर जान चाहन्छु म ठीक छुइन भनेर भनें । तिमी विजेता भएर यस्तो गर्ने भनेर मलाई गाली गर्‍यो । पार्टीमा केटीहरुलाई यस्तै होला भनेर अर्को कोठा लिएर राखेको छु । तिमी त्यहाँ गएर आराम गर, सबैजना आएपछि तिमीलाई उठाउन कसैलाई पठाउँछु भनेर मलाई भन्यो ।'
उनी त्यही कोठामा गइन् । त्यतिबेला उनी १६ वर्षकी थिइन् । उनको नागरिकतासमेत बनेको थिएन । 'मलाई त्यतिबेलाको याद भएको भनेको मेरो घरिघरि होस खुलिरहेको थियो । उसले शारीरिक सम्बन्ध राखिरहेको थियो । मलाई एकदम दुखिरहेको थियो । ४:३०/५:३० तिर मेरो होस खुल्यो । त्यो व्यक्ति मेरो छेउमा नग्न सुतिरहेको मैले देखें । ओछ्यानमा रगत लागेको थियो । त्यसपछि म एकदम ठूल्ठूलो आवाजमा रुन थालें,'आँखाभरि आँसु बनाउँदै युवतीले घटनाबारे भनेकी छन्,'त्यो मान्छेले मैले तिम्रो ब्यागमा २० हजार हालिदिएको छु । तिमी यो पैसा राख। तिमीलाई पैसा चाहिएको थियो त्यसैले तिमीले मलाई शारीरिक सम्बन्ध राख्न भन्यौ भनेर उसले मलाई म्यानिपुलेट गर्‍यो । म ढोकाको अगाडि उभिरहेको थिएँ, ढोका बन्द थियो । म घरि त्यो व्यक्तिलाई हेर्दै थिएँ घरि त्यो पैसालाई । आफैंलाई ऐनामा हेरिरहेको थिएँ । मसँग के भयो भन्ने कुरामाथि मलाई विश्वास लागिरहेको थिएन । म पनि बलात्कृत हुन सक्छु भन्ने कुरामा मलाई विश्वास नै लागिरहेको थिएन ।'
त्यो घट्नापछि नग्न तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्दै उक्त व्यक्तिले ६ महिनासम्म लगातार आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको पनि उनको दाबी छ । 'उसले मेरो तस्बिर/भिडियो लिएको र यसबारे कसैलाई भन्यो भने तस्बिर सार्वजनिक गरिदिन्छु । एकदम चलेको अनलाइनमा मेरो फोटोग्राफर साथी छ भन्यो । म एकदम डराएको थिएँ । एकदम असहाय अनुभव भयो ।म रुन पनि सकिनँ । मेरो शरीर जमेको जस्तो भएको थियो । मैले कपडा लगाएँ । उसले नै ट्याक्सी बोलाइदियो । मेरो मोबाइलमा परिवारको २ सय भन्दा बढी मिस्डकल थियो,'उनले भनेकी छन् । उक्त व्यक्तिले आफ्नो साथीसँग पनि उनलाई शारीरिक सम्बन्ध राख्न लगाइएको कुरा पनि उनले बताइदिएकी छन् । त्यतिबेला आफू सम्बन्धमा रहेको प्रेम 'खड्का' र उनले उक्त व्यक्तिको कन्सल्टेन्सीमै पुगेर पुराना भिडियो र तस्बिर डिलिट गर्न लगाएको कुरा उनले भिडियोमा बेलिविस्तार लगाएकी छन् । त्यहीबेला कोरियोग्राफरसमेत रहेकी पूर्व मिस नेपाललाई सहयोगका लागि कुरा गर्दा उल्टै आफैंलाई दोष लगाएको कुरा उनले सार्वजनिक गरेसँगै पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बा यो घटनामा जोडेकी छन् ।
'त्यसपछि मैले त्यो 'मिस नेपाल'लाई फोन गरें । मैले भने म्याम यो व्यक्तिले मलाई यस्तो-यस्तो गरेको छ । ६ महिनासम्म यस्तो गर्‍यो । म बल्ल यो सत्यता बाहिर निकाल्दैछु । म्याम हामी उसको अफिसमा छौं । कृपया आउनुस् अनि मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि उनले के भनेकी थिइन् म त्यो शब्द नै भन्न चाहन्छु,'भिडियोको भाग ३ मा उनले उक्त घटना सम्झँदै भनेकी छन्,'तिमी किन यो सबै मलाई सुनाउँदैछौ । तिमी बलात्कृत हुनु त तिम्रो समस्या हो । यो मेरो समस्या होइन, मलाई किन सुनाइरहेको ।'
त्यतिबेला पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले उनलाई यस्तो भनेको कुरा खुलेसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भयो । माल्भिकाले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत लामो पोस्ट लेख्दै क्षमायाचना मागेकी छिन् । 'एकदमै दु:ख लागेको छ । मलाई विस्तृतमा त थाहा छैन । तर तिमीले मलाई कल गरेको थियौ र आफ्नो अब्युजरको बारेको भनेकी थियौ । तर मैले त्यतिबेला तिमीलाई सहयोग गरिनँ जतिबेला तिमीलाई मेरो आवश्यकता थियो । त्यो क्षमालायक होइन । मलाई क्षमा गरिदेउ भन्ने आश पनि गर्दिनँ । तिमीलाई मैले सुनिनँ, विश्वास गरिनँ, सहयोग गरिनँ, त्यसमा एकदमै माफी माग्न चाहन्छु । तिमीलाई सहयोग नगरेर तिमीले भोगेको अन्यायमा साथ दिएँ भन्ने कुरामा स्वीकार गर्छु,'माल्भिकाले लेखेकी छन्,'तिमीसँग क्षमा पाउन एकदमै ढिला भइसक्यो भन्ने मैले बुझेको छु। तर अहिले म तिमी यो कुराबाट बाहिर निस्केको देख्न चाहन्छु । त्यतिबेला मैले गर्नुपर्ने कुरा म गर्छु । त्यतिबेलासम्म म लैंगिक विभेद र यौन दुर्व्यवहारको हरेक प्लेटफर्मबाट हट्न चाहन्छु ।'
त्यस्तै त्यतिबेला उनको तस्वीर खिचिदिने फोटोग्राफर श्रीधर पौडेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मनोज पाण्डेको अनुरोधमा आफूले तस्वीर खिचिदिएको तर एजेन्सी र क्लाइन्टबीचको सम्झौतासँग आफ्नो सरोकार नभएको दाबी गरेका छन् । 'म पेशाले व्यवसायिक फोटोग्राफर हुँ । विभिन्न इभेन्ट तथा व्यक्तिहरुको फोटोसुट गर्नु मेरो व्यावसायिक धर्म हो । त्यसैक्रममा अल अबाउटदिस्किनको फोटोसुट गरिदिनपर्‍यो भनि मनोज पाण्डेले अनुरोध गरेपछि मैले काम गर्ने अनलाइनखबरको स्टूडियोमा फोटो खिचिदिएको हो । त्यसबापतमा मैले मेरो पारिश्रमिक लिएको हुँ । भिडियोमा दुवैजना मिलेर फोटो खिचेको र पाँच हजार दिएको भनेकी छिन्। यसमा मेरो संलग्नता भनेको स्टुडियोमा फोटो खिचिदिने र त्यसबापत पाण्डेसँग पारिश्रमिक लिने हो। एजेन्सी र क्लाइन्टविच के कति पारिश्रमिकमा कुरा भएको हुन्छ त्यसमा मेरो सरोकार हुन्न ।' युवतीले कन्सल्टेन्सीमै पुगेर यौन दुर्व्यवहारको कुरा सार्वजनिक गरिसकेपछि आफूले उक्त व्यक्तिलाई आइन्दा दुर्व्यवहार नगर्नुस् भन्दै हिँडेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
आफूले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उक्त युवतीले डिल्लीबजारमा रहेको अर्को एजेन्सीले पनि आफ्नो दुर्व्यवहार गरेको कुरा खुलाएकी छन् । उक्त घटनापछि आफूले मोडल बन्ने सपना नदेखेको उनको दाबी छ । 'त्यतिबेला मलाई लाग्यो यो इन्डस्ट्री नै यस्तै छ । सबैजना यही बाटो भएर जान्छन् । सायद उनीहरु यो कुरासँग ओके छन् । तर मलाई यो कुरा चाहिँदैन। यो इन्डस्ट्रीमा केही चाहिँदैन भनेर मैले अभिनेत्री बन्ने मेरो सपनाको ढोका बन्द गरें,'उनी भन्छिन्,'त्यतिबेला मलाई कसैले सहयोग गरेन । सायद त्यो मेरो गल्ती थियो । त्यो सौन्दर्य प्रतियोगितामा जानु मेरो गल्ती थियो । त्यो लेमोनेड खानु गल्ती थियो । तर मलाई अहिले लाग्छ त्यो मेरो गल्ती थिएन।'
मास्टर इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी पढिरहेकी उक्त युवतीले दुर्व्यवहारको कुरा मनभित्रै राख्दा आफू निको हुन नसकेको बताउँदै युवा उमेरका इन्फ्लुएन्सर परिवारसहित अगाडि बढ्न सुझाव दिएकी छन् । 'मैले यो कुराहरु धेरै वर्ष मेरो मनभित्र राखें । र म सन्चो भइनँ । म भइनँ नि त सन्चो । मैले कति पैसा खर्च गरेर थेरापी गरें । कति औषधि खाएँ । म सन्चो भएँ त । भइनँ नि त,'भावुक हुँदै भनेकी छन्,'टिकटकमा बालबालिकाहरूले स्पोन्सर पाएको सुटिङमा गएको देख्छु । तर म उनीहरुका लागि चिन्तित हुन्छु । यदि तपाईंहरु इन्फ्लुएन्सर हौ, अभिनेत्री बन्न चाहन्छौ अथवा मोडल कृपया आफ्नो आमालाई नलिई कहीँ पनि नजाउँ । मैले गरेको गल्ती नगर ।'
युवतीले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको कुरा सार्वजनिक गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई साथ दिनेहरू बढेका छन् । 'तिम्रो कथा सुनेर हृदय दुखेको छ । त्यो समयमा फर्केर त्यो घटनामा तिम्रो गल्ती छैन भन्ने मन छ । तिमीलाई सुन्न, सुरक्षा दिन र न्याय दिलाउन असफल भएकोमा माफी माग्न चाहन्छु,'पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा लेखेकी छन्,'बलात्कार भएको १ वर्षभित्रमा कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने हाम्रो कानुनको सीमितता भए पनि हाम्रो सामाजिक न्याय अझै बाँकी छ । तिमी यो लडाईंमा एक्लै छैनौ । सबैले तिमीलाई उक्त यौन दुराचारीबारे मिडियो बोलेको भन्दै साहसिक भन्दैछन् । तर म तिमीलाई त्यस्तो भन्दिनँ । साहसिक हुनु तिम्रो बाध्यता थियो ।'
'आफ्नो सत्यता सुनाउन तिमी साहसिक भयौ । तिमीले सुनाएको सबै कथा मैले सुनें । तिम्रो कथाले मन दुख्यो । सर्भाइभरको रूपमा बाँच्ने तिम्रो अठोटलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु,'गायिका समृद्धि राईले लेखेकी छन्,'उनले आत्महत्याको दुस्प्रयाससमेत गरेको खुलाएकी छिन् । त्यसले उनी कति ट्रमामा थिइन्, कस्तो कुराहरुबाट गुज्रिइन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।' अभिनेत्री ऋचा शर्मा, गायक रोबिन तामाङ, गायिका अभया सुब्बा र महिला अधिकारकर्मी प्रकृति भट्टराईलगायतले ती युवतीलाई साथ दिइरहेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ १७:४३